Ireo saribakoly tsy mampino an'ity artista rosiana ity | Famoronana an-tserasera
Ny saribakoly efa iray amin'ireo zavatra malaza amin'ny sarimihetsika mampihoron-koditra sasany izay, miaraka amina mozika manodidina mampiahiahy, dia azo atao ny mamorona fitambarana izay mety hanome ny tenany ny tondra-dranon'ny olona mahita azy amin'ny tahotra.
Izany fikasihana izany zaza sy tsy manan-tsiny Izy io dia mamorona vokatra mifanohitra amin'izany, toy ny zava-mitranga amin'ireo saribakoly tsy mampino izay noforonin'ity mpanakanto Rosiana antsoina hoe Michael Zajkov ity ary mety hahatonga anao ho gaga amin'ny zava-misy iainan'izy ireo.
Eto no ahafahantsika miresaka momba ny mpanao asa tanana iray izay mihoatra ny fetra hanovana ilay zavatra amboariny ho zavakanto kely. Michael Zajkov dia iray amin'ireo mpanao asa tanana izay noho ny teknika sy ny fahalalany tsara, ahodina ny tarehin'ireto saribakoly ireto amin'ny seho kanto iray manontolo hahatratrarana fahalavorariana sy realisme toy izany.
Ao amin'ny GIF mihetsika izay zarainay dia afaka mahita tsara ianao amin'ny haavo azon'i Zajkov toy ny hoe mihazona ny lohan'ny olona saika tena izy miaraka amin'ny tarehy manjavozavo eny an-tànany. Azontsika atao ny mampiditra an'ireny saribakoly sy saribakoly ireny amin'ny sarimihetsika mampatahotra izay malaza be.
Zajkov dia nahazo diplaoma tao amin'ny Oniversiten'i Kuban State any Russia tamin'ny 2009. Tamin'ny 2010 ka hatramin'ny 2013 dia niasa tamina teatra saribakoly izy. Tena nahomby taorian'ny fampirantiana «Saribakoly Art» tany Mosko tamin'ny taona 2013. Mba hamoronana ireo sary na saribakoly ireo dia mampiasa tanimanga polimerika, ny maso vera dia noso-doko avy any Alemana ary ny volo dia nafarana avy any Frantsa.
Manana fampahalalana bebe kokoa momba ny sangan'asany avy ianao ny instagram. Ary inona no voalaza, raha te hanana fotoana fampihorohoroana ianaoMila mifandray aminy fotsiny ianao mba hividianana sombiny izay, heveriko fa tsy ho lafo vidy noho ny kalitao ananan'ny tsirairay.
Ho an'ny faritra hafa Jan Svankmajer.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ireo endrika tsy mampino an'ireo saribakoly noforonin'ny artista rosiana ireo
Vicky Sanchez dia hoy izy:
Jereo i Ana Circea. Azo antoka fa afaka nanao toy izany koa ianao.
Valiny tamin'i Vicky Sánchez
Ana Circea dia hoy izy:
Cool! Tsy maintsy nanandrana izany izy. :)
Valiny tamin'i Ana Circea
Mety ho resaka fampisehoana izany :)